mmiri n'okpuru osimiri trampoline
mmiri n'okpuru osimiri igwe ịgba ọsọ
Aqua Bike- Ùgwù
The ahu eku nke aqua bike Fanciest ka nke igwe anaghị agba nchara 316L na n'elu bụ electrolytically egbu maramara. The oche na handle na-e na a pụrụ iche na-enyi na enyi imewe na pụrụ ịgbanwe malite n'ihu laa azụ na elu na ala. The mmiri wheel ka nke naịlọn, nke bụ environmentally friendly na inogide. The pụrụ iche breeki imewe emepụta a abụọ iguzogide mmiri eruba na enhances mmega.
6. Akwụkwọ ikike: 3 afọ
The aqua bike na-arụpụtara na elu àgwà anaghị agba nchara AISI316L featuring mgbochi nchara nchedo dị na mba na ụkpụrụ. The elu nke ngwaahịa na-eji electrolytic polishing na mgbochi corrosive mkpuchi na-ekwe nkwa anwụ ngwa ngwa na ịma mma nke ngwaahịa. Kemeghi oche na ịṅụ izute mkpa nke dị iche iche na-eji ọkụ.
E nwere ụzọ abụọ na-enye ndị na-eguzogide: The pupụtara nke naịlọn wheel n'ịwa mmiri eguzogide mgbe jiri ịnyịnya ígwè; Ma ọ bụ kpatụ bọtịnụ dịkwuo kọntaktị ebe n'etiti breeki na mpe mpe akwa (na n'elu nke naa wheel) na naa wheel ntọt mmiri eguzogide. Ọrụ nwere ike họrọ nke ọ bụla dị ka ha mkpa ha.
The aqua bike ike ga-eji dị iche iche ebe dị ka Hotels, spas, igwu ọdọ mmiri, Health na mma klọb, Recreation klọb, Medical emmepe, Home, Schools, Sport ìgwè na na.
Aqua mma bụ a ọhụrụ ụdị mmega, ọ na-eweta ọnụ niile mma klas na mmiri. Aqua mma nwere ike n'ahụ ọrụ, kwalite ọbara na metabolic iwu, ugbu belata mmebi mere site mmega. Aqua mma a rụrụ dị iche iche na ngwa (bike, igwe ịgba ọsọ, elliptical ọzụzụ, wdg); ọ bụ a fun egwuregwu.
The aqua bike bụ nnọọ anụ na oru oma na ngwá na-enwe aqua spinning mgbatị gị ọdọ mmiri. Na ndị na-eguzogide mmiri, ọ nwere ike mma obi ntachi obi na-abawanye na-eku ume ike, mgbe nụchaa gị ụkwụ, sculpt gị ike na abdominal mọzụlụ. Water mgbali ụgwọ ọbara mgbali, n'ụzọ dị irè na-egbochi ọdịdị varicose veins ma na-enyere iji kpochapụ Cellulite.
Ọ na-karịsịa gosiri maka: arọ ọnwụ, ọgwụgwọ nke osteoarthritis, ọgwụgwọ anụ ahụ, na azụ hip unan, na-agba ígwè ọzụzụ, aqua mma, ndị agadi, rheumatic ọrịa na anụ ahụ na-agbatị n'ozuzu.
Previous: Big Discount igwe anaghị agba nchara Water tank Manhole Cover
Next: aqua Bike- Fashion
Fitmax mmiri n'okpuru osimiri Bike
Mgbatị Pool Bike
Igwe anaghị agba nchara ịtụ Bike
Igwe anaghị agba nchara Water Bike
Mmiri n'okpuru osimiri aqua Bike
Mmiri n'okpuru osimiri aquatic Bike
mmiri n'okpuru osimiri Bike
Mmiri n'okpuru osimiri ịtụ Bike
Water aqua Bike
Water ịnyịnya ígwè N'ihi Sale
Water Bike aqua Cycle pedal
Water Bike N'ihi Sale
Water Bike N'ogbe
Water Mgbatị Bike
Ekwentị: + 86-0532-8908 3155
Tinye: No.17,Yuehe Road,Konggang IndustrialPark,Liuting,Chengyang,Qingdao